Maayarka Mooge Oo Joojiyey Lacago Badan Oo Lagu Naas-nuujin Jiray Siyaasiyiin Waa Weyn, Madax-dhaqameed Iyo Suxufiyiin – somalilandtoday.com
Maayarka Mooge Oo Joojiyey Lacago Badan Oo Lagu Naas-nuujin Jiray Siyaasiyiin Waa Weyn, Madax-dhaqameed Iyo Suxufiyiin
(SLT-Hargeysa)-Maayarka Magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa la sheegay inuu joojiyey Lacago boqolaal Milyan oo shillinka Somaliland ah, kuwaas oo ahaa qaar lagu naas-nuujin jiray oo fadhiga ay ku qaadan jireen shaqsiyaad aan kamid ahayn shaqaalaha Dawladda hoose.
Maayar Cabdikariin Axmed Mooge ayaa la sheegay inuu ka jaray oo uu joojiyey lacago ka baddan Mushaharka shaqaalaha Dawladda hoose ay qataan oo fadhiga lagu siin jiray shaqsiyaad aan kamid ahayn shaqaalaha Dawladda hoose,kuwaas oo iskugu jira siyaasiyiin Madax-dhaqameed iyo suxufiyiin iyo shaqsiyaad kale.
Dhanka kalena Lacagahan ayaa lagu sheegay inay iskugu jiraan qaar lagu naas-nuujin jiray shaqsiyaad Rag iyo Dumar-ba leh oo siyaasiyiin,Madax-dhaqameed iyo suxufiyiin ka koobnaa iyo weliba Lacago kale oo sifo sharci darro ah uga bixi jiray Dawladda Hoose oo si gaar ah loogu tasarufi jiray,kuwaas oo caddadkooda marka la isku wadda geeyo la sheegay inay ku dhaw yihiin dhowr boqol oo Milyan oo shillinka Somaliland ah.
Sidoo kalena xoggo uu Wargeyska Waaberi ka helay illo wareedyo kale duwan ayaa sheegay in qaar kamid ah shaqsiyaadkii fadhiga lagu naas-nuujin jiray ee ku maymay xoolaha ummadda ee fadhiga lagu masruufi jiray inay maal-mihii u dambeeyey ay dul meehanabayeen xarunta Dawladda Hoose ee Hargeysa,kuwaas oo qiil u raadinayey sidii ay ku heli lahayeen jiif oo jaqdii ay barteen.
Geesta kalene Maayar Cabdikariin Axmed Mooge oo hadda muddo laba bilood ku siman xilka Maayarnimada caasimadda haya, ayaa hore u ballan-qaaday inuu ilaalin doonno xoolaha ummadda, islamarkaana uu dhageysan doonno dhawaaqa kasoo baxaya dadweynaha oo dib loogu celinayo canshuurtooda.
Gunanadkii Maayar Cabdikariin Axmed Mooge ayaa u muuqda mid ka dhabbaynaya ballaqadkiisii ahaa inuu illaalin doonno xoolaha ummadda,isagoo hadda ummadda u bad-baadiyey oo u joojiyey Lacago dhawr Boqol oo Milyan oo shillin ah,kuwaas oo qaarkood lagu naas-nuujin jiray oo fadhiga lagu siin jiray siyaasiyiin Madax-dhaqameed iyo Suxufiyiin oo qaadan jiray Lacago ka baddan inta ay Mushaharka u qaataan shaqaalaha Dawladda Hoose ee Hargeysa iyo weliba Lacago kale oo lagu tasarufi jiray oo uu joojiyey.